2 Korintofo 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
13 Ne mprɛnsa so+ ni a merebɛba mo nkyɛn. “Asɛm biara nnyina adansefo baanu anaa baasa anom asɛm so.”+ 2 Maka dedaw, na ɛte sɛ nea mewɔ mo nkyɛn ne mprenu so, nanso minni hɔ seesei, na meredi kan aka akyerɛ wɔn a wɔayɛ bɔne ne wɔn a aka no nyinaa sɛ sɛ meba bio a, merenhu mmɔbɔ,+ 3 efisɛ morehwehwɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Kristo kasa fa me so,+ Kristo a ɔnyɛ mmerɛw wɔ mo fam, na mmom ɔwɔ tumi mo mu no. 4 Ampa, efi mmerɛwyɛ+ mu na wɔbɔɔ no asɛndua mu+ de, nanso Onyankopɔn tumi+ nti ɔte ase.+ Ɛyɛ ampa nso sɛ yɛne no yɛ mmerɛw de, nanso Onyankopɔn tumi a ɔda no adi ma mo nti, yɛne no bɛtena ase.+ 5 Monkɔ so ara nsɔ nhwɛ sɛ mowɔ gyidi no mu anaa, monkɔ so mpɛɛpɛɛ mo mu nhwɛ.+ Anaasɛ munnye ntom sɛ Yesu Kristo wɔ mo mu anaa?+ Gye sɛ ebia momfata de. 6 M’ani da so ankasa sɛ mubehu sɛ yɛnyɛ nnipa a wɔmfata. 7 Afei yɛbɔ Onyankopɔn mpae+ na moanyɛ bɔne biara, ɛnyɛ sɛ ɛbɛkyerɛ sɛ yɛfata, na mmom sɛnea ɛbɛyɛ na moayɛ adepa, na yɛn de, yɛayɛ sɛ nea yɛmfata. 8 Na yɛrentumi nyɛ hwee ntia nokware no, gye sɛ yɛyɛ ma nokware no.+ 9 Bere biara a yɛbɛyɛ mmerɛw na moayɛ den no,+ yɛn ani gye ankasa; na eyi ho na yɛrebɔ mpae,+ sɛ wɔbɛkɔ so asiesie mo yiye. 10 Eyi nti na minni mo nkyɛn yi merekyerɛw eyinom abrɛ mo, na sɛ meba a, me ne mo anni no denneennen+ sɛnea tumi a Awurade de ama me sɛ memfa nhyɛ den+ na memmfa mmmu abam no te. 11 Nea aka no, anuanom, monkɔ so nni ahurusi mma wonsiesie mo yiye, nnya awerɛkyekye,+ nnya adwenkoro,+ ntena asomdwoe mu;+ na ɔdɔ ne asomdwoe Nyankopɔn+ no ne mo bɛtena. 12 Momfa mfewano kronkron nkyiakyia mo ho.+ 13 Akronkronfo no nyinaa kyiakyia mo. 14 Yɛn Awurade Yesu Kristo adom ne Onyankopɔn dɔ nka mo nyinaa na munnya honhom kronkron mu kyɛfa.+
2 Korintofo 13